Ekubeni okokuqala kwaziswa kwiminyaka engaphezu kwamashumi amabini edlulileyo, i-WordPress ikhulile (kwaye ikhulile) ngoku ngoku kuthiwa ikhutshwe njenge-популярна система за управление на света. Namhlanje, ngaphezu kwekota iiwebhusayithi ezikhoyo ziqhutywa kwi-WordPress.
Kodwa ukususela ngexesha elidlulileyo, в eyaziwayo kakhulu kukuba, abantu baninzi bafuna ukunyusa kwiindlela ezingenanto. Jonga nje kwi-Microsoft Windows kunye inani elikhulu le-malware, ii-virus nezinye izinto yenzelwe ukujolisa nje kule nkqubo eyodwa yokusebenza.
Iingxelo ze-10 WordPress ezininzi ezixhatshazwayo (umthombo). Uphando kwi-2017 ichonge iinguqu ze-74 ezahlukileyo ze-WordPress kwiwebhusayithi ye-Alexa Топ 1 yezigidi; I-11 yale miqulu ayivumelekanga – umzekelo 6.6.6 (umthombo).
2.1 7. Khusela i-директория yakho ye-wp-admin
2.5 11. Архивиране, резервно копие на куки!
3.1 Финал на Iingcinga
Ngethamsanqa, i-WordPress yinqanaba elinikeza ininzi ithuba lokuzikhusela. Xa ndikuncede ukusetha nokuphatha iiwebhusayithi eziliqela kunye namabhulogi ngokwam, ndingathanda ukwabelana nawe ezinye zezinto ezisisiseko ongayenza ukuze uncede ukukhusela isayithi lakho le-WordPress.
Нацистки izicwangciso ze-10 zhhuseleko ongazenzayo.
Ukukhusela iphepha lakho lokungena alikwazi ukufezwa yiphina inye в етил, kodwa ngokuqinisekileyo kukho amanyathelo kwaye iifowuni zokhuseleko unokuthatha ukuze wenze naluphi na ukuhlaselwa okuncinci ukuphumele.
Iphasiwedi eqinileyo iya kubandakanya umxube we:
Yiba yi-alfhanumeric (AZ kunye no-az)
Okungaphaya kwegama lakho lephasiwedi, likhuseleke ngakumbi. Zama eli jenerethi yegama le-password xa unenkathazo ephakamileyo. https://passwordsgenerator.net/
I-Wall ботове ukusuka kwi-blog yakho yeWP.
Ukuba i-IP етил eyenza ukuhlaselwa kulandelwa, ngoko unokubamba ukukhwabanisa ngokuphindaphindiweyo ukuzama ukuzama ukugcina indawo yakho ikhuselekile. Yingakho ukuhlaselwa kwe-DDOS yelizwe jikelele kwenzeka ngee-adresi ezininzi ze-IP kunye nemvelaphi eyahlukileyo yokuhlaselwa, ukuphonsa iinkonzo zokubamba kunye nekhuseleko lwewebhu kwi-guard.
Вход LockDown kwaye Решение Сигурност Разтвор Zombini zinikezela ngezisombululo ezinkulu zokukhusela iphepha lakho lokungena kwiwebhusayithi. Balandela iidilesi ze-IP kwaye banciphisa inani lokuzama ukungena ukukhusela iwebhusayithi yakho.
Sithethe ngeendlela ezahlukeneyo zokukhusela iphepha lakho lokungena kwi-WordPress – lawo Manyathelo akhankanywe apha ngasentla ziziseko ongayenza. Kuya kufuneka wazi ukuba ezinye ii-web host ziyakuyalela ezinye zezi ndlela zokhuseleko kubasebenzisi bazo. Kukho inani lezinye izinto zhhuseleko onokuzisebenzisa kwiisayithi zakho.
7. Khusela i-директория yakho ye-wp-admin
Ukwenza njalo, uzakufuneka ungene ngemvume kwipaneli yokulawula i-akhawunti yakho. Ingaba usebenzisa cPanel или Plesk, ukhetho o lukhangelayo „Iphasiwedi-khusela izalathisi“
Ngenye indlela, unokukhusela i-password kwisikhangeli ngokuthi uthinte iifayile zakho .htaccess kunye .htpasswds. Iinkcukacha zenyathelo-nyathelo kunye nesikhokelo sekhowudi ziyafumaneka simahla kwa IDynamic Drive.
Qaphela ukuba iphasiwedi-ukukhusela isikhombisi sakho se-wp yaphula uluntu i-AJAX ye-WordPress -Uya kudinga ukuvumela iimvume zokulawula iAjax nge .htaccess ukuphepha naziphi na iimpazamo zesiza.
Uxhumano lweHTTP срещу HTTPS (Umthombo: Sucuri)
Kubablogi bodwa kunye namashishini amancinci, изо-SSL yasimahla, ekwabelwana ngayo – onokuyifumana rhoqo kumboneleli wakho wokubamba, Masibhale, okanye CloudFlare -Ihlala ingaphezulu kokulunga ngokwaneleyo Kumashishini aqhuba intlawulo yabathengi-kungcono kakhulu kuwe ukuthenga isitifiketi себе SSL ukusuka kumphathi wakho wewebhu okanye igunya lesitifiketi (Калифорния ).
Ngaphandle kwaloo nto, inceda kwakhona ukukhawulezisa isayithi yakho encinci ngokukhupha umxholo othile. Totalhanda olu khetho, jonga kwi-CloudFlare njengomzekelo. I-CloudFlare inikezela ngeenkonzo ze-CDN kumanqanaba amanqanaba ahlukeneyo, ngoko unokukwazi ukusebenzisa izixhobo ezisisiseko mahhala. https://www.cloudflare.com
Хакерите phantse bafune ukusizakala ngobuthakathaka kunye nokuxhaphazwa okuyaziwayo okushiywe kungafihliwe kumane kucele inkathazo. Oku kuhamba ngokuphindwe kabini kwiiplagi ezivame ukudala ngamakhampani amancinci anezixhobo ezincinci.
Ukuba usebenzisa ii плъгини, qinisekisa ukuba uhlaziyo lukhutshwa rhoqo, okanye uqwalasele ukufumana iiplagi ezithandwayo ezinokusebenza okufanayo zigcinwa zihlaziywa.
Ngokufanelekileyo, yenza indawo yokuvavanya ebeka izibuko kwindawo yakho ephilayo kwaye uvavanye ukuhlaziywa apho. Xa uqinisekile ukuba yonke в isebenza kakuhle ngoko ungasebenzisa ukuhlaziywa kwisayithi ephilayo.
11. Архивиране, резервно копие на куки!
Khangela isisombululo sokukhusela esilungileyo kwaye savunywa. Nokuba utyalo-mali oluncinci lufanelekile ukuba ulondoloze ngezinyembezi kwimeko yengxamiseko. В ефана BackupBuddy Unokukunceda ukugcina yonke в equka isiseko sakho kwiziko elilodwa.
Thatha umzekelo HostGator, elinye lamagama asekelwe ngakumbi kumdlalo. Ngaphandle kwezixhobo ezisemgangathweni ze-Cloudflare, i-HostGator (ngentengo ye- $ 10 + / mo) iphinda ifike ngoKhuselo lwe-Spam yamahhala, ukuKhutshwa kweMalware ngokuzenzekelayo, i-Backukuku, i-Backuku, i-Backuku, i-Backuku, U-Backu.
Umphathi we-WordPress ophetheyo, Kinsta, yakha izixhobo zomlilo kunye nokubeka esweni iiseva zazo ze-malware kunye nokuhlaselwa kwe-DDoS ngenkqubo eyakhelwe isiko.
Ukuba le nto yinto ангажиране iyenze kuwe, ndiyakhuthaza ukuba ukhangele ukuba yeyiphi impawu zokukhusela ummkeli wakho onika kwaye uyilinganise kunye nezinto ezikhoyo ngoku.
Nangona uphumelela izicwangciso ezininzi zokukhusela hergoko unokuzifumana, ngaba wena qiniseka ukhuselekile?
Nanku apho в efana nayo LweNanja Security kungena, okukunceda uhlole indawo yakho ngenxa yobuthathaka.
Kukho izizathu ezimbalwa eziphosakeleyo zokusebenzisa into efana ne-Security Ninja kodwa ndivumele ukuba ithuluzi endikucebisa ukuba lisetyenziswe kwizigaba ezininzi ekuhambeni kwakho ukugcina indawo yakho.
Okokuqala, yigijime kwiwebhusayithi yakho ‘njegokuba’ – ngaphambi kokwenza nayiphi iinguqulelo. Vumela i-plugin ipake kwaye iqhube isayithi lakho ngaphambi kokuba ikunike iziphumo.
Emva koko kusekelwe kwezo ziphumo, sebenzela ukufumana indawo yakho. Ukhuseleko lwe-Ninja lwenza ngaphezulu kweemvavanyo ze-50 ukuhlola ubungqina bakho. Nangona emva kokuba wenze utshintsho lwakho, ligijime kwakhona (kunye naliphi ixesha kukho utshintsho lwesayithi okanye i-plugin актуализации) ukuvavanya indawo yakho.
Ukuba le nto ithetha njengomsebenzi omncinci kakhulu kuwe, i-Security Ninja iphinda ifikelele iimodyuli ezongeziweyo (про версия, indawo enye ye-29) enokukunceda ukulungisa iingxaki ezifumanekayo.
Ukunqanda i-IP ye-IPM emibi eyi-милион eqokelelwa kwizigidi zeendawo ezihlaselwe
Khusela ifowuni yokungena kwi-brute-force атака
Финал на Iingcinga
Nangona zonke ezi zinto zingabonakala zigqithiseleyo kumsebenzisi oqhelekileyo we-WordPress, ndiqinisekisa ukuba yonke into (kunye nokunye) iyimfuneko. Ukungaziboni iinkcukacha ze-hack emhlabeni winke kwaye ungenzi ixesha elithile, ndivumele ukwabelana nawe ngolwazi oluthile kwiziko ezininzi ezifihlakeleyo ndinceda ukulawula.
Ekuqaleni kwaqala njengendawo elula ye-биография, ndadala www.timothyshim.com. Kucacile ukuba, yinto nje endinokumisela kwaye ininzi yexesha ihamba yodwa, nje ngeyona nkcazelo. Ngexesha elide leenyanga, kwesi siza ayenzi nto kwaye ayiqokeleli idatha, ubhekane nokuhlaselwa kwe-30 – inhlanganisela yamandla enqabileyo kunye neyinkimbinkimbi.